३१ साउन, पोखरा । पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका–६ वैदामस्थित रत्नमन्दिरमा सुरक्षाका लागि खटिएका नेपाली सेनाका एक प्युठले अर्का प्युठलाई गोली हानी हत्या गरेको छ । कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्कबहादुर खत्रीका अनुसार प्युठ वसन्त लोहारले आफ्नै साथी गणेशसिंह विष्टलाई आज बिहान ४ः३० बजे गोली प्रहार गरेका थिए । गोली लगेर गम्भीर घाइते भएका विष्टको उपचारको क्रममा गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । आपसी रिसिबीका कारण लोहार...बाँकी
चीनद्वारा १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग घोषित
३१ साउन, काठमाडौँ । चीन सरकारले बाढीपहिराका कारण नेपालमा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आपत्कालीन सहायतास्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर नगद उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यहाँ आज शुरु भएको नेपाल–चीन उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्तामा चीनको राज्यपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो । द्विपक्षीय वार्तामा नेपालको प्रतिनिधित्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले गर्नुभएको छ । वार्तामा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की,...बाँकी
बाढीबाट वेपत्ता वृद्धा र बालकको शव फेला
३१ साउन, राजविराज । सप्तरीको कृष्णा सवरण गाउँपालिका वडा नं २ स्थित गैडी पुलमा सोमबार एक नवजात शिशु मृत फेला परेका छन् । रूपनी गाउँपालिका वडा नं ६ बस्ने सरस्वतीदेवी साहले भर्खरै जन्माएको शिशु सो खोलामा फ्याँकिएको अवस्थामा शव बरामद भएको इलाका प्रहरी कार्यालय, रूपनीले जनाएको छ । खोलामा शिशुको शव देखेर स्थानीयवासीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । घटनास्थलमा प्रहरी पुगेर अनुसन्धान गर्दा शिशु फाल्ने व्यक्तिको पहिचान भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक यादवराज उप्रेतीले बताए । स्थानीय स्वास्थ्य चौकी, सीता...बाँकी
नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन सम्भव, तत्काल काम थाले पनि कम्तिमा तीन वर्ष लाग्ने !
भारत र पाकिस्तानले नेपालजस्तै भौगोलिक अवस्थाबाट अध्ययन–अनुसन्धान गरेर पेट्रोलियम निकालिरहेका छन् । भारतले मुम्बई, गुजरात, आसाम, तमिलनाडु, अरुणाञ्चल प्रदेशलगायतका क्षेत्रबाट पेट्रोलियम निकालिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको अध्ययन अनुसार पनि नेपाल पेट्रोलियमका लागि उपयुक्त ठाउँ हो । नेपाल सरकारका विभिन्न ३१ वटा प्रतिवेदनले मात्र होइन, दैलेखमा अहिले पनि बलिरहेका दीपहरुले पनि नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ पाइने देश हो भन्न तथ्य खोज्न अन्त जानु पर्दैन । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परि...बाँकी
बाढी, पहिरोको विध्वंस
अविरल वर्षाले निम्त्याएको विनासकारी बाढी पहिरोमा परी अबौं धनजनको क्षति भएको छ । पछिल्लो विवरण अनुसार ७० जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने त्यति नै संख्यामा मानिसहरु वेपत्ता छन् । हजारौं विस्थापित छन् । विस्थापितहरुको अवस्था एकदमै दयनीय छ । समथर भूगोल ओगटेको सीधै मधेस डुबानमा परेका कारण आश्रय लिएर बस्ने जमिनसमेत छैन् । विपत्तिले आक्रान्त वस्तीमा अझैसम्म सरकारी राहत पुग्न सकेको छैन् । सेना प्रहरी राहतमा त खटिरहेका छन् । तर, उनीहरुले पनि लत्ता कपडा, खानेकुरा दिन सकिरहेका छैनन् । यो समस्या...बाँकी
महासंघको अधिवेशनले पत्रकारको दुर्घटना होइन जीवन वीमाको प्रस्ताव गराउन सक्ला ?
August 14, 2017 Posted by Jhilko.com
३० साउन, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चालन गरेको ‘पत्रकार दुर्घटना बीमा’मा पत्रकारको आकर्षण देखिएको छैन । महासंघ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना विभागले सञ्चालन गरेको दुर्घटना बीमामा पत्रकारको आकर्षण नबढेको हो । २०७२ सालबाट सञ्चालन भएको दुर्घटना बीमा करिब १० हजार पत्रकारमा अहिलेसम्म एक हजार ७७० जनाले मात्र बीमा गरेको कार्यालय सचिव शेषराज खतिवडाले बताए । महासंघका धेरै पत्रकार आवद्ध भएपनि संख्यात्मक रुपमा बीमा गराउने पत्रकारको संख्या बढेको छैन । व...बाँकी
महासंघको लागि प्रेस सेन्टरको प्रतिष्ठानले टिकाराम प्रधानलाई ग¥यो सिफारिस
काठमाडौ । प्रेस सेन्टर सञ्चार राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको तर्फबाट पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा टिकाराम प्रधानलाई सिफारिस गरिएको छ । आज बसेको प्रतिष्ठानको पदाधिकारी वैठकले प्रधानलाई केन्द्रीय सदस्यको लागि सिफारिस गरेको हो । प्रतिष्ठान आवद्ध प्रधानलाई पत्रकार महासंघ प्रष्तिठान केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । प्रधान काठमाडौ पोष्टमा लामो समयदेखि आवद्ध छन् । सोमबार विहान प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष सुमिता लामाको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले सर्वसम्वत रुपमा प्रधानलाई उम्मेदवार...बाँकी
खोज, उद्धार, राहत कार्यमा रेडक्रश सोसाइटी सक्रिय
३० साउन, काठमाडौँ । अविरल वर्षा तथा बाढी पहिरोको विपत्तिमा नेपाल रेडक्रश सोसाइटीले आफ्ना प्राथमिक उपचारक, रेस्पोन्स स्वयंसेवक, खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा अनवरत रुपमा जुटिरहेको जनाएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, सप्तरी, बाँके, धनुषा, बर्दिया, सिन्धुली, रसुवा, चितवन, मकवानपुर, ललितपुर लगायतका बाढी तथा पहिरोबाट बढी प्रभावित स्थानमा स्थानीय पाँच हजार रेडक्रशका स्वयंसेवक तल्लिन रहेका सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले जानकारी दिए । सोसाइटीका अनुसार हालसम्म ती...बाँकी
आजदेखि मौसममा सुधार आउने, पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना
काठमाडौँ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आजदेखि मौसममा सुधार आउने जनाएको छ । महाशाखाले आज पूर्व र मध्य क्षेत्रमा हल्का वर्षा हुने जनाएको छ। पश्चिमका केही क्षेत्रमा पनि हल्का वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। गत शुक्रबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण देशभर बाढी पहिरोको प्रकोप बढेको छ। बाढी पहिरोका कारण ६६ जनाको ज्यान गएको गृह मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा पुष्टि गरेको छ। केही व्यक्ति अझै बेपत्ता छन्। हजारौँ घरहरुमा डुबान तथा पहिरोका कारण क्षति पुगेको छ। मनसुन कमजोर भएकाले कम बदली र वर्षात् भए...बाँकी
३० साउन , काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अविरल वर्षा र बाढी पहिरोबाट भएको विपत्तिको अवस्थामा सत्यतथ्य सूचना संकलन तथा सम्प्रेषण गर्न सबै आमसञ्चारका माध्यम, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र सरकारी निकायलाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी बाढी पहिरोबाट भएको जनधन र भौतिक संरचनाको क्षतिका बारेमा सत्यतथ्य एवं विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न पनि सबै सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामचन्द्र ढकालद्वारा ज...बाँकी